အာရှကျားဖြစ်တဲ့ “စင်ကာပူရေတပ် ဘက်စုံတိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ်” | Cele News Asia
Cele News Asia
အာရှကျားဖြစ်တဲ့ “စင်ကာပူရေတပ် ဘက်စုံတိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ်”
By admin Asian News
၁။ စင်ကာပူရေတပ်ရဲ့ အနာဂတ်ကာလ ဘက်စုံတိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘော advanced multi-role combat vessels ကို သက္ကရာဇ် ၂၀၂၇ ခုနှစ်မှာ တပ်တော်ဝင်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ စင်ကာပူရေတပ်ဦးစီးချုပ် navy chief Lew Chuen Hong က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစစ်သင်္ဘောအမျိုးအစားတွေကို စင်ကာပူရေတပ်မှာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ တပ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဒုံးပျံတင် ကော်ဗက်စစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ အစားထိုးအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
multi-role combat vessels တွေထဲက ပထမဆုံးအစီးကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ တပ်တော်ဝင်နိုင်အောင် လျာထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စစ်ဆင်ရေးတာဝန်တွေကို ၂၀၂၇ ခုနှစ်မှာ စတင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Invincible-class submarine ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နှစ်ဆန်းပိုင်းတုန်းက ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ရေချပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အဲ့ဒီရေငုပ်သင်္ဘောဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရှိနေပြီး ပင်လယ်ပြင်စက်စမ်းသပ်ခုတ်မောင်းခြင်းတွေ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံကို သက္ကရာဇ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ရောက်ရှိဖို့ လျာထားပါတယ်။
၂။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ straitstimes.com အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေ ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး မူရင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြုစုသူများနဲ့ သတင်းပြုစုသူတို့ကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အချိန်ပေးဖတ်ရှုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်သူတွေအတွက် စက္ကန့် ၂၀ ပဲ အချိန်ရမယ့် ရုရှ ဂေါမိတ်ကျောက် ဒုံးကျည်
တရုတ်ကိုယှဉ်ဖို့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ မှမြန်မာကို ရွေး လိုက်သော အမေရိကန်
အီရန်နိုင်ငံပြည်တွင်းဖြစ် ပင်လယ်ရေကြောင်းစောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေး လေယာဉ်ငယ် Chakavak ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့
အိန္ဒိယရေတပ်မှ ဝယ်ယူထားသော Killo class ရေငုပ်သင်္ဘောအား မြန်မာ့တပ်မတော် ရေတပ်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည့် ဒီဇင်္ဘာ (၂၄)ရက်နေ့တွင် တပ်တော်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်ထား
ရုရှား နှင့် အိန္ဒိယ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်မည့် BrahMos II, ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြန်ဆုံးသော Supersonic Missile
ရုရှားရေတပ် Corvette ပင်လယ်ပြင်လက်နက်ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်
အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်း လူ ၄-ဦးသေဆုံးရသော သေနတ်ပစ်ခတ်မှု့တွင် ကျူးလွန်သူမှာ ဆော်ဒီပညာတော်သင် စစ်ဖက်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်နေ
မေရိကန်တို့၏ ခရုဇ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုနှင့် လေ့ကျင့်မှုတို့သည် အလွန်အန္တရာယ်ရှိပြီး စစ်အေးခေတ်သစ်ကို ရောက်သွားစေနိုင်ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယားပြော
အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ဇနီးနဲ့ ကလေးနှစ်ဦးကို ထိုင်းအစိုးရ အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးဖို့ အေအေ တောင်းဆို
Dogfight ပြုလုပ် ရာတွင်ရန်သူလေယာဥ်နောက် သို့မိမိရောက်လျှင် မိမိနိုင်သည်ဟူသောဆိုရိုးစကားပယ်ဖျက်
ဗိုလ်ကြီး နဲ့ ရဲဘော်တို့ရဲ့ သံယောစဉ်
မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ Su-25 တွေဝယ်မယ်ဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်မလား??
အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတွေ၊ လေယာဉ်တွေကို ဟောင်ကောင်ပိုင်နက်ထဲ နားခိုခွင့်ပိတ်ပင်
တိုက်ပွဲမဝင်လိုက်ရဘဲ Human/Machine Error ကြောင့် ပျက်ကျခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ထုတ် F-15 တိုက်လေယာဉ်များ
၁၀ နာရီ ကျော်ကြာ ပင်လယ်ထဲပြုတ်ကျသည့် မြန်မာလှေလုပ်သားအား ထိုင်းရေတပ်မှ ကယ်ဆယ်
နွားဖိုးပဲရင်းလိုက်ရတဲ့ တရုတ်တို့ဗျူဟာ …. မှတ်သားလောက်ပါတယ်
ပဲ့ထိန်းဒုံးအစစ်နဲ့တွေ့ရမယ်လို့ ဂျပန်ကို မြောက်ကိုရီးယားခြိမ်းခြောက်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ SEA Game ကာလအတွင်း အားကောင်းသော တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်
အီရန်က ပြည်တွင်းဖြစ် ခရုဇ်ဒုံးကျည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်
အရှေ့အလယ်ပိုင်း အမေရိကန်စစ်စခန်းအားလုံးကို မစ်ဇိုင်းဖြင့် ချိန်ရွယ်ထားဟု အီရန်သတိပေး
အရီဇိုးနားသဲကန္တာရအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လေယာဉ်သင်္ချိုင်းဆိုတာ
အိန္ဒိယလေတပ်ရဲ့ Su-30MKI တိုက်လေယာဉ် အင်ဂျင်ပြသာနာ
မြန်မာအသင်း အုပ်စုပထမနဲ့ ဆီမီးတက်ပြီ
အမေရိကန်ရေတပ်၏ USS Abraham Lincoln လေယာဉ်တင်သဘောင်္ တပ်ဖွဲ့အားလေ့လာခြင်း
အိန္ဒိယရေတပ်၏ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီးလေယာဉ်မောင်း တာဝန်စတင် ထမ်းဆောင်
အီရန်စစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးလေယာဉ် အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောနှင့် နီးကပ်စွာပျံသန်း
ဘန်ကောက်မှာ ရှေ့ဖုံးခါးစည်းဝတ် ကိုယ်တစ်ပိုင်း ဝတ်လစ်စားလစ် စားပွဲထိုးမိန်းကလေးများ ဒဏ်ရိုက်ခံလိုက်ရ
ICJ တွင် တရားစွဲဆိုထားမှု အစိုးရ ဘက်မှ ရပ်တည်၍ ထောက်ခံကြောင်း “ဝ”တပ်ဖွဲ့ ထုတ်ပြန်
Su-30 တိုက်လေယာဉ်တွေဝယ်လို့ ဘယ်လာရပ်စ် အစိုးရဝေဖန်ခံရ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုတ်သဘောင်္ကို ထုတ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ရုရှား
စပိန်နိုင်ငံမှာ စေတီတွေ တည်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို စတင်ကိုးကွယ်လို့နေကြပြီ….
အိန္ဒိယရေတပ် ၆ ခုမြောက် ဒိုနီယာလေယာဉ်အုပ် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်
အီရတ်သည်နောက်ဆုံးပေါ် T-50IQ အလင်းရောင်တိုက်လေယာဉ်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးလေယာဉ်များကိုလက်ခံရရှိ
ရုရှားက ရန်သူ့တပ်ရဲ့ အမြောက်နဲ့ လေယာဉ်တွေကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဇီးကွက်ပုံသဏ္ဍာန်မောင်းသူမဲ့လေယဉ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မည်သည့်နေရာကိုမဆို တိတ်တဆိတ်သွားရောက်ဗုံးကြဲနိုင်တဲ့ B-2 Spirit ဆိုတာ
အမေရိကန် သမ္မတစီးတဲ့ ကျည်ကာဘတ်စ်ကား Ground Force One ဆိုတာ
အချုပ်အချာအာဏာကို အထိပါးမခံမြန်မာ့မြေကို တလက္မအထိမခံဆိုသူများ အတွက် ” ၀ “တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်
(၂၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံတပ်မတော်(ကြည်း)များ သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲ
© Cele News Asia 2019 Cele News Asia2019 • Themaga powered by WordPress